Okusingqongileyo- Ukuhlaziywa okuGreen | Ukuhlaziywa okuGreen (iphepha 3)
Kutheni le nto kukho amatye amakhulu emaweni naseelwandle?
Esi sithuba sithetha ngophando olucacisa ukuba kutheni kukho amatye amakhulu embindini wolwandle okanye ngaphezulu kwamawa. Ngaba uyafuna ukwazi ngayo?
IJay njengehlakani lokuphinda kugalelwe amahlathi asePortugal
Esi sithuba sithetha ngenyathelo likaMontis lokusebenzisa i-jay njengehlakani lokuphinda kuhluthwe amahlathi asePortugal.
Inani leentlobo zezisongelo zophula irekhodi elitsha ngo-2017
Kule posi, iintlobo ezisongelweyo ngokubhekisele kunyaka ophelileyo ziyahlalutywa. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba lonyuke kangakanani eli nani?
Iilwandle ziyehla ngakumbi kunanini na ngaphambili
Esi sithuba sithetha ngokuthotywa okukhulu kweelwandle zehlabathi ziba nefuthe kubantu. Ufuna ukwazi okungakumbi?
Isifo seHlathi esingenanto
Kule posi siza kuthetha ngokubaluleka kokunxibelelana phakathi kwezinto eziphilayo ehlathini ukuze zisinde. Ufuna ukwazi okungakumbi?
Ukuphinda kusetyenziswe kwakhona iphepha kunye nekhadibhodi kunyukile ngo-2017
Esi sithuba sibonisa idatha ekwandeni kwephepha kunye nekhadibhodi yokurisayikilisha eSpain ngo-2017 kunye noko kulindelweyo. Ufuna ukwazi okungakumbi?
Iziphumo zotshintsho lwemozulu kwiinyosi kunye neziphumo zazo
Utshintsho lwemozulu luchaphazela ukusinda kweenyosi. Oku, kubeka emngciphekweni ezolimo zaseSpain. Ufuna ukwazi okungakumbi?
Izikhalazo zabemi bendalo esingqongileyo zineziphumo
Kule posi siza kubona eminye imizekelo yeziphumo zoqhankqalazo lwendalo kulwakhiwo. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba bayasebenza nyani?
Ukuzinza ngakumbi ukumisa ukulahleka kweAmazon
IAmazon iphantsi koxinzelelo olukhulu kuyo yonke imisebenzi yezoqoqosho etshabalalisa indalo. Luzuzwa njani uzinzo?
Iplanethi ilahlekelwe sisiqingatha seengqaqa zekorale
IZizwe eziManyeneyo zilumkise ngelithi umhlaba uphela sele ulahlekelwe sisiqingatha seengqaqa zekorale. Oku kunayiphi imiphumo?
UTrump usayina isindululo sokuxhaphaza ioyile yeArctic
Umongameli waseMelika, uDonald Trump, utyikitye umthetho oyilwayo ukuze kusetyenziswe ioyile yeArctic. Iya kwenziwa?
Ukubaluleka komjikelo wamanzi kwiplanethi
Ngena apha ufunde ukuba yintoni umjikelo wamanzi, awona manqanaba aphambili kunye nokubaluleka kwako kwiplanethi. Ngaba uyafuna ukwazi yonke into ngamanzi?
Iprojekthi yeHondar kunye neziphumo zezixhobo ebomini bethu
Ngelishwa izinto ezifana neplastiki okanye iintsimbi zitshabalalisa iilwandle zethu. Iprojekthi efana neHondar 2050 izama ukufundisa abantu ukuba bayiphephe
I-Bonn COP23 ekhethekileyo, yintoni eshiye le ngqungquthela yemozulu
I-United States ibhengeza kwi-COP23 ukuba iyasishiya isiVumelwano sase-Paris ngelixa ii-greenhouse gases ziqhubeka ukwanda.
Ukuma kweenyawo kwendalo, yazi impembelelo yakho nendlela ebalwa ngayo
Ukwazi indawo yethu yendalo kubalulekile ukuqala ukuyinciphisa ngemikhwa ezinzileyo, ukufumana iziphumo ezizezakho kunye nokuqonda ukuba isebenza njani.
Ungcoliseko lomoya lubangela ukufa kwabantu abali-16.000 ngaphambi kwexesha ngonyaka
Ungcoliseko lomoya yingxaki yokusingqongileyo echaphazela ngakumbi impilo yabantu kwizixeko ezikhulu. Kwenziwa ntoni ngokuchasene nayo?
Ukutshatyalaliswa kwamahlathi eAmazon kuncitshiswe ngama-28% xa kuthelekiswa nango-2016
Kule mihla kubanjwe iNgqungquthela yemozulu yaseBonn (COP23) kwaye bekukho intetho malunga nokugawulwa kwamahlathi eAmazon. Injani imbonakalo?
Iicapsules zekofu luhlobo lwenkunkuma ekufuneka iqokelelwe kuhlobo lwesikhongozeli. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba ziphinda zisetyenziswe njani?
Iintaka zaseSpain zisokola ngenxa yeempembelelo ezibangelwa ngumntu kwaye ziyehla. Kuthekani ngale meko?
Apha sichaza ukuba yintoni uphuhliso oluzinzileyo, iimpawu zalo, imvelaphi kunye neentlobo. Ngaba uyafuna ukwazi yonke into malunga nayo?
Fumanisa iinjongo kunye nemilinganiselo yozinzo lokusingqongileyo kwaye kutheni zibaluleke kangaka kwihlabathi lanamhlanje
Ukhenketho lwendalo luyanda eSpain
Ngexesha eliphakathi kuka-2009 no-2016 eSpain ukhenketho lwendalo lukhule nge-32%. Ngaba oku kwanda kukhenketho lwendalo kuzinzile?
Isigama neempazamo esizenzayo xa sithetha ngemililo yehlathi
Xa sithetha ngemililo yehlathi senza iimpazamo ezithile kwisigama. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba zeziphi ezo mpazamo?
Bacela ukuba bandise iindlela zokuthintela ukutshiswa
Imililo yehlathi eyenzekileyo kwiintsuku zakutshanje e-Asturias, Castilla y León naseGalicia sele ibanga amaxhoba amane.
Abahlaziyiweyo bacela ukohlwaya nabani na ongcolisayo
Njengesiseko soTshintsho lweMozulu kunye noMthetho woTshintsho lwaMandla, imibutho eliqela ifuna irhafu eqinileyo yetekhnoloji engcolisayo.
Iiflamingo ziyakwazi ukucoca amanzi emigxobhozo
I-flamingo ihamba ngendlela ekhethekileyo kwaye, kunye nelindle labo, banceda ukucoceka kwe-microbial yezinto eziphilayo kwimigxobhozo enetyuwa.
Ukurisayikilisha imigqomo, imibala kunye neentsingiselo
Intsingiselo yemibala yezikhongozeli zokurisayikilisha kunye nendlela ekufuneka sizisebenzise ngayo ukwenza ukwahlulwa kwenkunkuma.
IHydroponics yindlela equka ukusetyenziswa kwezisombululo zezityalo ezikhulayo Ngaba uyafuna ukwazi yonke into malunga ne-hydroponics?
ISpain iphucula umgangatho wayo womoya ngo-2016
Enye yeendaba ezimnandi kukuba umgangatho womoya ngokubanzi eSpain uphuculwe kancinci ngo-2016, xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo.
I-Cerdolí, isoyikiso esihlaselayo ngenxa yomnqamlezo phakathi kwehagu yasendle kunye nehagu yaseVietnam
Namhlanje siza kuthetha nge "piglet". Ngumnqamlezo phakathi kwehagu yaseVietnam kunye nehagu yasendle, eye yaba yingxaki enkulu kwindalo esingqongileyo.
Ukurisayikilisha kusanda kuba lula
Sinokwenza izijekulo ezilula nezilula zokuphinda sizisebenzise kwakhona, ngaphandle kokuyiqonda, siza kuba sinceda umhlaba wethu. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba zeziphi izijekulo zomzimba?
Inkunkuma yeplastiki elwandle yingxaki enkulu yokusingqongileyo
Zimalunga ne-12 lezigidi iitoni zenkunkuma yeplastiki ezilwandle. Kwenzeka ntoni kwezi plastiki, kwaye ziziphi iimpembelelo abanazo?
Ungcoliseko lwengxolo lukhona kuzo zonke iimeko zasedolophini nakwizixeko ezikhulu. Yintoni enokwenziwa ukuyiphepha?
Elinye lamandla ahlaziyekayo okusebenzisa ulwandle ngamandla e-wave, ekwabizwa ngokuba ngamandla amaza.
Iziqithi zeCanary zihlangabezana nokwehla kwezicikilishe ezinkulu Ngaba uyafuna ukwazi okungaphaya malunga nokuncitshiswa kweelark?
Amandla eTidal okanye amandla olwandle
Funda ukuba isebenza njani kunye neempawu zobuchwephesha bamandla olwandle kunye nezityalo zamandla. Ummangaliso wobugcisa
Ukusetyenziswa ngokugqithileyo kwisanti kuvelisa iimpembelelo zokusingqongileyo nezopolitiko
Isanti sisixhobo esiya sincipha kwaye sixabisekile, kuba sinqabile ngenxa yamaqondo aphezulu okhukhuliseko olubangelwa yintlango.
Ubume bendawo buchazwa njengesixokelelwano sendalo somhlaba.Ngaba uyafuna ukwazi yonke into ngendalo? Ngena apha.
Kutheni le nto kufuneka uphinde usebenzise ioyile esele isetyenzisiwe?
Ilitha enye yeoyile esele isetyenzisiwe inakho ukungcolisa phantse iilitha ezili-1.000 XNUMX zamanzi okusela. Ke ngoko, kubalulekile ukuphinda usebenzise ioyile esele isetyenzisiwe.
Ukuphuma kwamanzi eutrophication luhlobo longcoliseko.Zeziphi iingxaki ezibangelwa kukusetyenziswa kwamanzi kwindalo?
Ukusetyenziswa kwe-microalgae yokuphelisa ungcoliseko lwamanzi
Ungcoliseko lwamanzi sesinye seziphumo eziphambili zomsebenzi wezemizi-mveliso. Nge-microalgae banokutshatyalaliswa.
Izixeko kunye nokusetyenziswa kwamandla aphezulu kwihlabathi liphela
Iidolophu azinakuthwala iipesenti ezi-2 zommandla wonke womhlaba. Nangona kunjalo, basebenzisa iipesenti ezingama-75 zawo onke amandla avelisiweyo.
Ngokwesiqhelo, ungcoliseko lwamanzi lwenzeka ngokukhupha ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo kwimithombo yobutyebi bezinto ezahlukeneyo ezingcolisayo.
Ukunyuka okukhulu kweemoto zombane e China
Kule mihla, iimoto zombane ezininzi zithengiswa e-China kunakwilizwe liphela. Kukho inyani yokwenene kuzo zonke iintlobo zezithuthi zombane.
Ukungazi okukhulu kwabemi malunga nendalo
Uphononongo lubonisa ukungakhathali "okukhathazayo" okuboniswe luluntu ngokubanzi malunga nemingcipheko esisiseko yendalo
I-Arctic permafrost iyanyibilika
Ngaphantsi kwempembelelo yomntu kunye nokufudumala kwehlabathi, i-permafrost iyanyibilika kwaye iyaqhubeka ikhupha igesi yemethane.
I-biotope yindawo egcina izilwanyana kunye nezilwanyana. Ukufunda yonke into malunga nabo kunye nobudlelwane babo ne-ecosystems, ngena apha.
Iingxaki zokusingqongileyo zichaphazela imithombo yamandla ehlaziyekayo. Sichaza ukuba ezi ngxaki zinempembelelo njani ekusetyenzisweni kwamandla azinzileyo
Umlilo waseDoñana wonakalise iindawo ezikwi-lynx
Umlilo uchaphazele iindawo ezithile kuluhlu lweentlobontlobo ezintathu zamabhinqa aseIberia. Ezindawo zisetyenziswa ngabantu ababhinqileyo ukuzingela amaxhoba abo.
I-Doñana yeSizwe kunye nePaki yeNdalo
IDoñana yabhengezwa njalo ngo-1999 kwaye zombini iPaki yeSizwe kunye neNdalo yeNdalo zibandakanyiwe kuluhlu lwezithuba zendalo ezikhuselweyo.
I-94% yabemi baseSpain bavezwa kukungcoliseka komoya
Ingxelo yomgangatho womoya iqikelela ukuba phantse abantu abazizigidi ezingama-44 bavezwa kukungcola ngo-2016.
Ingxaki yongcoliseko lwamanzi
Ungcoliseko lwamanzi yingxaki enkulu ejongene nabantu abaninzi, inkunkuma, ukuchitheka, izibulala-zinambuzane kunye nommiselo omncinci zezinye zezizathu.
Iziphumo zomlilo wehlathi
Ukutsha kwamahlathi kubangela umonakalo omkhulu kwindalo kunye nomonakalo kwezoqoqosho nakwezentlalo. Zineziphi iziphumo?
Iifudgehogs ziphinde zafakwa kwiAlhambra
Isithuba seminyaka esixhenxe ubuncinci, bekungekho bungqina bokuba khona kweengqushu kwindawo yeAlhambra, kodwa oku kuya kuba yinto eqhelekileyo.
Kutheni kubalulekile ukukhusela i-posidonia oceanica?
I-posidonia oceanica yaziwa ngendima yayo kunxweme. Nangona kunjalo, asazi ukuba kutheni kufanele ukuba zigcinwe. Yazi apha.
Ukuqhubela phambili kwentlango eSpain yonke imihla
E-Spain, ukucwangciswa okungalunganga kunye nocwangciso lomhlaba kuqhuba ukuguquka komhlaba ube yintlango ngendlela eyintlekele.
Konke malunga neProtocol yaseKyoto
Iinkokheli zamazwe akhupha ezona gesi zininzi zisiya esibhakabhakeni zenza into ebizwa ngokuba yiKyoto Protocol ukuze ziyinciphise kwaye zithintele ukutshintsha kwemozulu.
Izizathu ezi-6 zokukhetha amandla ahlaziyekayo
Ngaba awusebenzisi amandla ahlaziyekayo? Sikunika izizathu ezi-6 ezinyanzelisayo zokuyeka ukusebenzisa i-fuels ze-fossil kwaye wenze umtsi kwimithombo yamandla ezinzileyo.
Ukuphefumla komhlaba ngemijikelo yonyaka yohlaza
Ngamaxesha onyaka otyani kunokwenzeka ukuba uqaphele indlela, enkosi kwezi zinto, uMhlaba "uphefumla" kwaye ungasinika ioksijini kunye nokutya.
I-CNMC igunyazisa ukudalwa kwesona sityalo sikhulu se-photovoltaic eYurophu eMurcia
I-CNMC iyamkele iprojekhti yeprojekthi yesityalo se-Mula photovoltaic solar, nje ukuba amandla ezemali eqela laseJamani iJuwi aqinisekisiwe.
Ukubaluleka koSuku lwezeNdalo kwiHlabathi liphela
Sibhiyozela uSuku lwezeNdalo kwiHlabathi liphela apho wonke umntu ekhunjuzwa ngokubaluleka kokugcina nokukhusela okusingqongileyo
Sisisizukulwana sokuqala ukuba sibe nazo izixhobo zokuthintela ukutshintsha kwemozulu kunye neminye imiceli mngeni esijongene nayo
Fumanisa ukuba ziziphi iimpawu ekufuneka umzi wale mihla ukwanelisa abemi bazo kwaye ube nobuhlobo nokusingqongileyo
URajoy ubhengeza ifandesi entsha enokuhlaziywa nge-3.000 MW
U-Mariano Rajoy ubhengeze ukuba uqalile iinkqubo zokumilisela ifandesi entsha yamandla ahlaziyekayo ee-3.000 megawatts (MW)
Iindidi ezahlukeneyo zeebhalbhu, yeyiphi oyikhethayo?
Kuxhomekeka kuhlobo lweebhalbhu ozisebenzisayo, ungatya + okanye - amandla. Iindidi zebhalbhu, amandla azo, ukusetyenziswa, ubude bexesha, ixabiso kunye neendlela ezihamba ngayo.
Yindlela echaphazela ngayo ukulahlwa kwenkunkuma kwindalo esingqongileyo. Siza kukuxelela ukuba inkunkuma iwuchaphazela njani umoya, umhlaba kunye namanzi esiwasebenzisayo.
I-Aerothermal isebenzisa amandla aqukethe umoya, oku kuhlaziywa rhoqo, ukuguqula umoya ube ngumthombo ongapheliyo wamandla.
IChernobyl iyaphila kwakhona emva kweminyaka engamashumi amathathu
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo kwafunyaniswa ukuba ummandla waseChernobyl apho kwenzeke khona le ntlekele ugcwele ubomi.
USUKU LOMHLABA u-2018 uyakuba ngu-Epreli 22
Usuku lomhlaba 2018 luza kubhiyozelwa nge-22 ka-Epreli minyaka le. Ngo-1970 yayingunyaka wokuqala lo msitho wabanjwa. Ukuhlaziywa kwamandla ohlaziyo
Kufunyenwe iintshulube ezinesiphene seplastiki
Izazinzulu ziye zafumanisa ukuba uhlobo lwesibungu esikwaziyo ukuthoba isidima se-polyethylene ekwiplastikhi.
I-UK iyeka ukusebenzisa amalahle ukuvelisa umbane kwiminyaka eli-135 kamva
Kwakusisizwe sokuqala ukusebenzisa amalahle ukwenza umbane, kwiminyaka eyi-135 kamva, sisokuqala ...
Iibhanki zisungula iMali mboleko eluhlaza
Iziko lezemali lisandula ukuveza iMali mboleko yayo eluhlaza, imveliso "eyenziweyo ngenjongo yokuququzelela ukufikelela kumandla ahlaziyekayo"
Nge-19 ka-Epreli lusuku lweHlabathi lweeBhayisikile Usuku oludumileyo lokukhusela abakhweli beebhayisikile kwaye babongoze amaziko ukuba anikezele ngezinye iindlela
Iziqithi zeCanary zitshintsha imodeli yazo yamandla: Ukusuka kwioyile ukuya kwi-revwables
Iingxaki ezintathu zeCanary Islands zemodeli yamandla (kunye nezisombululo zazo). Unxibelelwano phakathi kweziqithi. Ukusetyenziswa okukhulu kwamandla ahlaziyekayo. Ioyile
IFinland iya kuthintela ukusetyenziswa kwamalahle ukwenza umbane ngaphambi kowama-2030
URhulumente waseFinland uvakalise isicwangciso esiliqili secandelo lezamandla sokuphelisa ukusetyenziswa kwamalahle kwimveliso yombane ngowama-2030
Iziphumo zokutshatyalaliswa kwamahlathi
Zeziphi iingxaki ezibangela ukutshatyalaliswa kwamahlathi? Ezi ziziphumo zokugawulwa kwamahlathi ngenxa yemisebenzi yabantu etshabalalisa amahlathi namahlathi
ISpain, umzekelo ombi kwicandelo elihlaziyiweyo
Utshintsho ngokubanzi lwenkqubo yamandla ehlabathi, ukuvela kwecandelo elinokuhlaziywa, iziphumo zokusetyenziswa kwezixhobo zeefosili.
Utshintsho lwemozulu lunokuchaphazela nokukhethwa kwendalo ngokuguqula iindlela ezahlukeneyo zokuvela kwezinto eziphilayo.
Ukukhutshwa kwe-CO2 kufunyenwe kwiindawo ezomileyo ezichaphazela umjikelo wekhabhoni
Inkqubo yokungenisa umoya phantsi komhlaba ibangela ukukhutshwa okukhulu kwe-CO2, okunokuthi kuchaphazele kakubi ubushushu behlabathi.
Irhasi yeradon kunye neengxaki ezibangelwa yimpilo yethu
Fumanisa ubudlelwane beRadon yegesi kunye nomhlaza kwaye ukuba kukho ubungozi obuvela kwiRADON apho uhlala khona.
Yintoni iifama zesikolo kwaye zezantoni?
Kwiifama zesikolo abantwana banxibelelana nendalo. Kubaluleke kangakanani ukuba abantwana bonwabele indalo?
Izityalo ezidla inyama ziyifumana njani incasa yenyama?
Indaleko kunye nokukhula kwezinto eziphilayo ezidaliweyo ezifuna ukutya inyama. Izityalo ezidla inyama ziyifumene njani incasa yenyama?
Umgxobhozo wasePanama Bay uthoba isidima ngenxa yongcoliseko lwedolophu
Umgxobhozo wasePanama Bay ujongene nengxaki zongcoliseko kunye nokuhla komgangatho ngenxa yokungakhuli kakuhle kwedolophu.
Unomeva waseAsia luhlobo olungenelelayo kwaye luchaphazela iinyosi zethu
Olu hlobo lwesityalo lusongela abemi bomthonyama beenyosi zethu zobusi. Kuza kwenzeka ntoni kwaba nomeva?
Xylella fastidiosa, isitshabalalisi esihlasela kwii-Balearic Islands
Ibacteria iXylella fastidiosa iye yaba sisitshabalalisi esiyingozi kakhulu eYurophu. Ukonakaliswa kwayo okuninzi kuye kwanyanzela ukugawulwa kwamawaka eminquma.
Umthi wokulwa notshintsho lwemozulu: iKiri
Kuzo zonke iintlobo zemithi ezikhoyo ehlabathini, kukho eyodwa enokusinceda kwidabi lokulwa utshintsho lwemozulu. Ngumthi weKiri.
I-China ivuma isiCwangciso seMandla esiVuselelekayo seDola
I-China ibhengeza isicwangciso sezigidi zeedola ukukhuthaza uphando lwamandla avuselelekayo kunye nophuhliso kwilizwe liphela.
Zeziphi izinto zokwakha ezinobungozi kokusingqongileyo kwaye sazi njani?
Zonke iinkozo zesanti ziyabala xa kufikwa kumba wolondolozo lwezixhobo, ukuthintela ungcoliseko, njl. Kule nto sisebenzisa izixhobo zendalo.
Iipodemos kunye nePSOE zibonisa ukwala kwabo ukuvulwa kwemigodi ye-uranium eSalamanca
Kujongwe ukuba kwakhiwe umgodi wokukhupha i-uranium kwingingqi yeSalamanca yaseCampo Charro kumasipala waseRetortillo.
Ukwakha iibhlorho "eziluhlaza" zezilwanyana zasendle
Izinto ezibizwa ngokuba ziipaseji zezendalo zezi ndawo zidibanisa indawo yokuhlala enye kwaye zilapho iintlobo zinokutshintsha indawo zihambe ngcono.
Uluntu oluzimeleyo olusebenzisa kakhulu eSpain
Uluntu oluzimeleyo olwaphinda lwaphinda lwasetyenziswa kwakhona ngo-2014 yayiyi-Andalusia, ilandelwa yiCatalonia kunye noLuntu lwaseMadrid.
Phinda usebenzise i-la Madrileña, umkhankaso omtsha wokurisayikilisha eMadrid
IBhunga lesiXeko saseMadrid kunye ne-Ecovidrio basungule iphulo elitsha lokuphinda basebenzise iglasi kunye nokwenza abantu bazi ngokubaluleka kwayo.
Ukukhutshwa kwegesi kuncitshisiwe eSpain phakathi kuka-2010 kunye no-2014
E-Spain, ukukhutshwa kwegesi eluhlaza phakathi kuka-2010 no-2014 kuncitshiswe nge-8,9%. Ithetha ngantoni le nto?
I-Environmentalists iyakwala ukwakhiwa kwezitshisi ezimbini ezitsha eMadrid
EMadrid, kucetyisiwe ukuba kwakhiwe izitofu ezimbini zokunyanga inkunkuma. Amaqela aliqela okusingqongileyo ale.
Kutheni le nto iinyosi zibaluleke kangaka ebantwini?
Umntu ubangela ukunyamalala kweenyosi. Ezi zinomsebenzi obaluleke kakhulu ekusindeni kwethu, yintoni na?
Imida yongcoliseko lomoya iya kuguqulwa
IPalamente yaseYurophu iyakuvuma ukwenziwa kwezilungiso kwimimiselo yokunciphisa ukukhutshwa kukazwelonke kwezingcolisi zomoya ezintandathu.
Iindidi zesoyikiso kulondolozo lweentlobo
Iintlobo zeentyatyambo nezilwanyana ezisemngciphekweni wokuphela zicalulwa ngokwezigaba ezisongela ukhuseleko lwazo.
Ukukhula koqoqosho okanye ukuzinza kwendalo?
Izazinzulu ziqhubile nophando oluqinisekisa ukuba isinye kwisithathu sabemi baseSpain bakhetha ukungahoyi ukukhula koqoqosho ukuze bafumane uzinzo
Izitshixo ezizinzileyo zezixeko zekamva
Izixeko zekamva kufuneka zibe noqoqosho kunye noluntu olusekwe kwindibaniselwano yetekhnoloji entsha kunye nezinto ezintsha kunye nozinzo.
Bayayigxeka imiphumo emibi yezempilo yokuchitheka kweoyile
Benze isikhalazo malunga neziphumo zempilo ezibangelwe kukuchitheka kweoyile kubemi abahlala kufutshane neendawo zokutsala.
Impikiswano enkulu yee-biofuels kunye ne-carbon dioxide
Ubungakanani bobushushu obugcinwe yi-CO2 ekhutshwa ngokutshisa i-biofuels abukho kulingano kunye nenani le-CO2 elifunxwe zizityalo.
U-Achim Steiner: ISpain ibiya kuba yinkokeli kumandla ahlaziyekayo ukuba ibingenguye ingxaki yezoqoqosho
Ngokuka-Achim Steiner, owayesakuba ngumlawuli olawulayo we-UNEP, iSpain ngeyayiyinkokeli yamandla ahlaziyekayo kwihlabathi liphela ukuba yayingengobunzima.
Ukucoca amanzi usebenzisa i-graphene nanorobots
Ukukhokelwa yimagnethi yomhlaba, iityhubhu ezincinci zegraphene zinokugcina isinyibilikisi esinyibilikileyo. Phakathi…
Ukuvalwa ekusebenziseni iiplastiki kulibazisekile kude kube nge-1 kaJuni
Kwakuqala ukucwangciselwa uJanuwari 1. Yabekelwa elinye ixesha ukuya ku-Matshi 28. Ekugqibeleni iya kuvela ...
IPhephaLab, umatshini wokurisayikilisha iphepha leofisi
U-Epson sele eza kuthengisa umatshini ukuze aphinda asebenzise iphepha elungiselelwe iinkampani. IPhephaLab liyakwazi ukuvelisa iifomathi zamaphepha ahlukeneyo kunye nephepha elinamakha.
Inkunkuma yeplastiki yaseMeditera yaphinda yenziwa iimpahla
Izikhephe ezingama-200 zaseSpain zokuloba sele ziqalisile ukuqokelela inkunkuma yeplastiki kuLwandle lweMeditera. Umzi-mveliso waseMadrid uza kwenza umsebenzi wokurisayikilisha inkunkuma ukuze yenze ilaphu lophawu lwempahla.
Ungcoliseko lomoya luguqulwe lwaba yinki yomshicileli
Umphandi usandula ukuvelisa inkqubo yokuhluza kunye nokucoca, apho athe wakwazi ukukhupha umophu wekhabhoni kungcoliseko lomoya kwaye wayiguqula yayinki yomshicileli.
IiAerosols, ezo ntwana zithanda ukusebenza kwendlu eluhlaza
IiAerosols ziincinci ezincinci ezikhoyo emoyeni. Banoxanduva lokusekwa kwamafu kwaye, kwangaxeshanye, banegalelo kwimpembelelo yokushisa kwendlu kunye nokufudumala kwemozulu.
Iidrones ezinesakhono sokutyala imithi yeebhiliyoni enye ngonyaka
Injongo kukutyala imbewu ye-36.000 ngosuku ngenkqubo yedrone enokufikelela kwiindawo ezikude nezingafikelelekiyo
Ungcoliseko lwaseParis luyingozi njengomsi wecuba
NgoDisemba 13, 2013, izitrato zaseParis zazingcoliswe njengegumbi eliziisikwere ezingama-20 elinabantu abatshayayo abasibhozo.
I-NASA ikhupha ividiyo ebonisa umjikelo we-CO2 eMhlabeni
I-NASA ikhuphe ividiyo malunga nomjikelo we-CO2 kunyaka omnye emhlabeni. Idatha ka-1
Imveliso yehlabathi yeplastikhi
Imveliso yehlabathi yeplastikhi inyuka minyaka le (i-288 yezigidi zeetoni, oko kukuthi, ngaphezulu kwe-2,9% ngo-2012), ngokunxulumene ngqo nokukhula kwabemi, kwaye ngenxa yoko, kunye nokunyuka kwenani lenkunkuma.
Amajoni aseIndiya avela kuma-Amazon 'azingela' abazingeli ngokuloba ikamva lehlathi
KwiAmazon kukho izizwe ezininzi ezilwela ikamva lehlathi njengamajoni aseKa'poor
Iphepha kunye nekhadibhodi zenziwe ngomthi, kokukhona isixa sephepha kunye nekhadibhodi esetyenzisiweyo, kwaye kokukhona ukutshatyalaliswa kwamahlathi. Uncedo lwephepha kunye nekhadibhodi kukuba inokuphinda ifumaneke iphinde iphinde isetyenziswe ukwenza amanye amaphepha kunye nekhadibhodi.
I-tundra inokuba ngumthombo wokukhutshwa kwekhabhoni
I-tundra yindawo entle enekhabhoni. Ubuncinane bekunjalo.
NgoJuni 1992, kwiNgqungquthela yokuqala yoMhlaba, eyayiququzelelwe yiZizwe eziManyeneyo, igama elithi "uphuhliso oluzinzileyo" lwacaciswa.
Izizathu zokuba ulwandle luphulukane nesibetho
Ifumaneka kuMazantsi ePasifiki, lo mmandla unegalelo ikakhulu kwilahleko yesibetho kubuninzi bolwandle.
Yintoni amandla angwevu
Amandla angwevu ahlala ethetha ngawo ukubonisa ifuthe kwimveliso.
Solvatten, amanzi okusela elanga
ISolvatten yinkqubo yonyango lwamanzi eyilelwe ukucoca amanzi kwaye iwasele.
Ubomi benkunkuma kwindalo
Ukulahla inkunkuma kwindalo kuneziphumo ezininzi esingazaziyo ukuba zingalinganiswa kanjani konke konke ... kwaye zihlala zihlala ixesha elide kunokuba sicinga de zitshatyalaliswe.
Yenza amanzi angangcoliseki kangako
Nangona kuyinyani ukuba amashishini okanye amafama ahlala etyholwa ngokungcolisa amanzi, abasebenzisi babucala banesabelo sabo.
Izitulo zala maxesha nezendalo
Uyilo luya ngokuya lunomdla kwiimveliso ezinobume bendalo. Umzekelo woku ...
Iikomityi zekofu ezilahlwayo zendalo
I-100% yeekomityi ezinokuboliswa ziintsholongwane ziyinyani
Izinto zokwenza izinto eziphilayo
Kubalulekile ukuba usebenzise izinto zokwenza izinto eziphilayo
Ukukhupha ioyile kwiisanti zetela
Ayisiyo yonke into yokukhupha ioyile efanayo kuba kwiindawo ezithile kulula kwaye kuncinci ...
Iinkqubo zokusebenza kunye nokusingqongileyo
Iinkqubo zokusebenza azifani
Ndiziva, yinto yendalo
Felt yinto yendalo evumela ukwenziwa kweemveliso ezahlukeneyo
Isigcina-ntloko sebhayisekile yendalo
Kubahambi ngebhayisikile kukho umnqwazi wendalo owenziwe ngekhadibhodi
Ulwazi oluncedo ngeplastiki
Ulwazi kunye nenyani malunga neplastiki
Amacwecwe alahlwayo anokuphinda abe kwindalo
UDanone usebenzisa i-bioplastic kwezinye zeemveliso zayo
Izitena ezithimba i-CO2
Izitena ezinefuthe kwindalo esingqongileyo
Ikhokhonathi kunye nokusetyenziswa kwayo kumzi mveliso
Ifayibha yekhokhonathi ithatha indawo yemicu yokwenziwa kwezinye izinto
Imveliso yendalo esekwe kwii-aluminium openers
Iimveliso ezinohlobo lwe-eco-friendly ezisekwe kwisoda zinokuvula
Izizathu ezi-5 zokuba uluntu kufuneka lusebenzise ngokutsha
Kukho izizathu zokuba kutheni uluntu kufuneka lusebenzise ngokutsha
Iinkampani zeoyile eNigeria zibangele ungcoliseko olunokuthatha iminyaka engama-30 ukucoca
INigeria kunye neziphumo zokusingqongileyo zokuxhaphaza ioyile
Ukulima iti yaseUganda esemngciphekweni ngenxa yembalela ebangelwe kukutshintsha kwemozulu
Imichiza yendalo kunye nendalo
Namhlanje kunokwenzeka ukuba uthenge iimveliso zasekhaya zendalo ezinje ngekhaphethi
Izipaji kunye nezixhobo ezenziweyo ezenziwe ngamatayara aphinda asetyenziswa
Okwangoku kukho iinkampani ezininzi kunye neempawu ezihlaziya kwakhona amavili ukwenza iibhegi kunye nezinye iimveliso
Ifanitshala yoqalo lukhetho olunobubele ekhaya okanye eofisini
Kutheni iimveliso zexabiso eliphantsi zibiza kakhulu?
Iimveliso zendalo kunye nexabiso lazo
Ukubaluleka kwemithi yokufunxa
Ukukwazi kwemithi ukufunxa i-CO2 emoyeni kubaluleke kakhulu
Izihlangu ezikhathalele okusingqongileyo
Uphawu lwaseFrance i-FYE lubonelela ngezihlangu zendalo
Isityalo esitsha sokurisayikilisha inkunkuma eMérida
Ukuphela konyaka, ulwakhiwo lwesityalo sokurisayikilisha eMerida luya kugqitywa
Izibonelelo zokuphinda zisetyenziswe ioyile
Xa sigalela ioyile yokupheka okanye ioyile yemoto ezantsi esinkini, senza umonakalo kwiilwandlekazi nakwiilwandle njengoko zisenza ifilimu engenamanzi ethintela ukuhamba kwelanga kunye nokutshintshiselana ngeoksijini kubomi baselwandle.
Uphando malunga nokusetyenziswa kwezempilo kunye nokusingqongileyo
Uvavanyo lwenziwe kwindalo esingqongileyo kunye neemveliso zococeko kumazwe amaninzi
Amachibi akwiindawo ezikweleenjiko agxininisa kutshintsho lwemozulu
Amadama kwimimandla yetropiki avelisa ungcoliseko
Ukuhamba ngenqwelomoya kunye nongcoliseko abalwenzileyo
Ukuhamba ngeenqanawa zongcoliseko kunye nokuchitha amandla amaninzi
Icandelo lezinto zokudlala kunye nokugawulwa kwamahlathi
Icandelo lezinto zokudlala lihambelana nokugawulwa kwamahlathi eIndonesia
Phinda usebenzise ii-diapers kwaye uvelise i-biogas
Iprojekthi yokurisayikilisha inabukeni zabantwana kunye nokuvelisa ii-biogas
Inkunkuma yeplastiki ivumela ukwenziwa kwe-biodiesel
Inkunkuma yeplastiki yenza ukuba kube nakho ukuvelisa izibaso
Iikomityi ezinokutyiwa nezinokutsha
Iikomityi ezinokutyiwa nezinokutsha ukuze zikhathalele okusingqongileyo
Ilindle lezilwanyana ukwenza iphepha
Ilindle lezilwanyana linokuba yinto eluhlaza yokwenza iphepha
Iwotshi yomthi womthi
Iwotshi ye-ecological lukhetho olukhulu ukuba sinomdla wokukhathalela okusingqongileyo
Inkunkuma yendalo ingenza umgquba owenziwe kakuhle
Inkunkuma yendalo inokuphinda isetyenziswe iphinde ibe ngumgquba okanye isichumiso esiza kusetyenziswa njengezichumisi kwizityalo zethu. Abathengisi abancinci bathengiswa emarikeni, ngendlela elula, esinokuvelisa ngayo umgquba.
Iimveliso ezinokuboliswa ziintsholongwane nazo zinokungcolisa
Iincwadi zamaphepha ezenziwe ngokutsha
Iincwadi zamaphepha ezihlaziyiweyo zinobuhlobo kwindalo
Amadoda asebenzisa amandla amaninzi kunabafazi kubomi babo bemihla ngemihla kwaye banefuthe elikhulu kwindalo esingqongileyo
Uphando lwamva nje lubonisa ukuba abasetyhini basebenzisa amandla amancinci kunamadoda kwaye imisebenzi yabo yemihla ngemihla inefuthe elincinci kwindalo esingqongileyo.
Iihotele ze-NH zizinikele ekusebenziseni kwakhona
I-NH izimisele ukuphinda isebenze kwakhona kwizibonelelo zayo
Izindlu ezenziwe ngamaplanga zezinye izinto eziphilayo
Izindlu ezenziwe ngomthi zilolunye uhlobo lwendalo njengoko kuyinto enokuhlaziywa. Inentsebenzo ebambekayo yokwambathisa, eyomileyo nefanelekileyo yokwakha.
Ukuveliswa kweencwadi eziprintiweyo kungcolisa indalo
Ukuveliswa kweencwadi eziprintiweyo kuhamba ngeenkqubo ezingcolisa indalo kwaye kwimveliso yazo kufuneka kunqunyulwe izigidi zemithi ngonyaka. Incwadi ye-elektroniki ye-e-ncwadi yenye yezinto eziluhlaza.
Izixeko zehlabathi zikhanyisiwe ngezibane ze-LED
Iidolophu nezixeko kwihlabathi liphela zibandakanyile izibane ze-LED kwizibane zikawonke-wonke njengoko zivelisa ukonga amandla kwaye zinciphisa ukukhutshwa kwe-CO2.
Yintoni esinokuyithatha siye kwiindawo ezicocekileyo
Amanqaku acocekileyo ziindawo ezisasazwa kuzo zonke izixeko zaseSpain apho ungathatha khona inkunkuma engafanele kushiywa kwizikhongozelo kuba iyingozi kakhulu kwindalo esingqongileyo.
Ungawasebenzisa njani amanzi emvula
Amanzi emvula anokuba luncedo kwimisebenzi eyahlukeneyo ekhaya, ungayiqokelela kwaye uyijolise ukunciphisa ukusetyenziswa kwamanzi okusela ekhaya, ukunceda okusingqongileyo.
Ityala lendalo lamazwe ahambele phambili
Ityala lezendalo kumazwe athuthukileyo liphezulu kakhulu
Ukuprintwa ephepheni kuyaqhubeka nokuba yinkxalabo kwindalo esingqongileyo. Ukongeza kwimikhankaso yokonga, iinkampani zizama ukwenza ubuchwepheshe obubavumela ukuba basebenzise iphepha ne-inki encinci.
Iihotele zendalo: ukhetho lokhenketho olunoxanduva
Iihotele eziluhlaza kufuneka zihlangabezane neemfuno ezithile ukuze zikulungele oko. Ziyenye indlela yokuziqhelanisa nokhenketho olunoxanduva noluzinzileyo.
Ubucwebe baseCanada buvelisa imitya yomtshato eneedayimani ezinobuhlobo
Inkampani yaseCanada i-Brilliant Earth yenza imitshato yomtshato kunye neeringi zokuzibandakanya kunye needayimani ezinobuhlobo, igolide kunye neplatinam.
I-Bioplastic eyenziwe ngeentsiba zenkukhu
I-Bioplastic lukhetho lwexesha elizayo lokutshintsha iplastikhi esekwe kwipetroleum
Iimpahla ze-Organic zefashoni ezinzileyo
Imfashini ijoyina imoto ye-ecology ukwenza iziqwenga zempahla ezenziwe ngezinto zendalo ezinje ngomqhaphu we-organic olinywa kuwo ngokubhekisele kwimpilo, okusingqongileyo kunye namalungelo oluntu.
Umthetho wamandla ombane wehydroelectric uqinisa isidingo samandla acocekileyo acocekileyo (II)
Umthetho woPhuculo lwaMandla oMbane wamanzi uza kuba
Izinto eziphilayo zendalo kunye namandla ahlaziyekayo
Amandla ahlaziywayo anikezela ngemithombo eyahlukeneyo yokuvelisa amandla acocekileyo
Iimfazwe kunye neengxabano ezixhobileyo zivelisa ukungcola okukhulu
Iimfazwe kunye neengxabano ezixhobileyo zivelisa ukonakaliswa kwendalo
Ukusetyenziswa kwabathengi kunye nengxaki yokusingqongileyo
Ukuthengwa kwabathengi yenye yezo zinto zinoxanduva lokusingqongileyo
I-Seaweed ukwenza iplastiki
Iinkqubo zeAlgaeventure (AVS), yenye yezinto ezininzi
Iintlobo zemithi yasezidolophini kunye nokukwazi kwazo ukufunxa i-CO2
Kukho iintlobo ezithile zemithi nezityalo ezinomthamo omkhulu wokufunxa i-CO2
Ngaba kukho amandla aneleyo emhlabeni kuwo wonke umntu?
Kukho amandla awaneleyo kuye wonke umntu ukuba kusetyenziswa imithombo evuselelekayo
Ukuxhatshazwa okunoxanduva lwemithombo evuselelekayo
Ukusetyenziswa gwenxa kwemithombo yamandla ahlaziyekayo kunokuba neziphumo ezibi kokusingqongileyo
Iindlela zothutho kunye ne-CO2
Iindlela zothutho zezinye zezinto ezibangela ungcoliseko lomoya kwihlabathi liphela
Ukuthuthwa kolwandle kunye nokukhutshwa kwe-CO2
Uthutho lwaselwandle licandelo elinikela kakhulu kungcoliseko
Ukutshatyalaliswa kwamahlathi kunye nokubanjwa kwe-CO2
Ukutshatyalaliswa kwamahlathi kuyenza mandundu imeko yokusingqongileyo ngokungakwazi ukufunxa i-CO2
I-Antarctica kunye namandla ahlaziyekayo
Amandla ombane kunye notshintsho lwemozulu
Utshintsho lwemozulu lunokuchaphazela imveliso yamandla ombane emhlabeni
I-Nanotechnology kwicandelo lezamandla
Kwiingcali ezininzi kubalulekile ukwenza utshintsho kwicandelo lezamandla hayi kuphela ukufaka amandla ahlaziyekayo kodwa ...
Ukusekwa kweenkampani zobuchwephesha ezinobungakanani kwindalo esingqongileyo
Kwiminyaka embalwa iGreenpeace ivelise ingxelo apho ivavanya indlela ezisebenza ngayo iinkampani zetekhnoloji. Kule…
Njengayo nayiphi na imveliso, iiphaneli zelanga ze-photovoltaic zinobomi obulinganiselweyo. Umjikelo wobomi bayo unomndilili we ...
I-oyile inezicelo ezininzi, enye yezona zisetyenziswayo kukwenza i-polystyrene foam, imveliso esetyenziswa ngokubanzi ...
Ukusekwa kwamazwe kunye neenyawo zendalo
Ingxelo yeWWF yePlanethi ePhilileyo yingxelo eveliswa rhoqo emva kweminyaka emibini apho imeko ihlaziywa ...
Amazwe aneyona nkqubela phambili kwitekhnoloji evuselelekayo
Itekhnoloji kunye nobuchule obusekwe kumandla ahlaziyekayo ayanda kwihlabathi liphela. Kodwa kukho amazwe athile ...
Icandelo lezokhenketho kunye namandla ahlaziyekayo
Icandelo lezokhenketho libandakanya iihotele, iihostele, iindlela zothutho, ukuhamba kunye nemisebenzi kwindalo, njl. Eli candelo li ...
Umda wekhabhoni kunye namandla ahlaziyekayo
Ubushushu bekhabhoni sisixhobo sokulinganisa ukukhutshwa kwegesi emntwini, umbutho, ...
Izakhiwo eziluhlaza ngokuthe ngcembe ziya zisanda kumazwe ahambele phambili. Kancinci kancinci ...
Amandla kubalulekile ekufezekiseni ukukhula koqoqosho kwilizwe okanye kwingingqi ukusukela uninzi ...
Ukujikeleza kwezithuthi sesinye sezona zinto zibangela ungcoliseko lwendalo kwizixeko ezikhulu.Iidolophu zaseSpain ...
Ingcamango yamandla aluhlaza ayaziwa kubantu abaninzi, kodwa ibhekisa komnye umthombo wamandla ...
I-Biogas yindlela yendalo yokuvelisa igesi. Iveliswa kukubola kwenkunkuma okanye izinto eziphilayo. I…
Amazwe ahluphekayo kunye namandla ahlaziyekayo
Kumazwe ahambele phambili kukho ukukhula kuphuhliso, ukuveliswa kunye nokusetyenziswa kwamandla acocekileyo kwaye ahlaziyekayo. Kodwa le…
Inkqubela phambili yetekhnoloji kunye nemveliso esebenzayo kunye nendalo iyavela, njengokukhanyisa ngezibane ze-LED….